PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - Kuvalwe ihhovisi lamalayisensi elibanjwe inkunzi
Kuvalwe ihhovisi lamalayisensi elibanjwe inkunzi
Isolezwe - 2018-09-13 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE INTATHELI YESOLEZWE
KUPHOQELEKE ukuthi livalwe ihhovisi loMnyango wezokuThutha eliseMbilo, eThekwini, elisebenza ukuvuselela amalayisensi okushayela emuva kokuthi libanjwe inkunzi ngoLwesibili kwathinteka impahla yokusebenza.
Isitatimende esithunyelwe uMnyango wezokuThutha KwaZuluNatal, sidalula ukuthi leli hhovisi lizoze livulwe ngoLwesihlanu ngesonto elizayo.
Kuvela ukuthi kuningi okuphazamisekile nokuholele ekutheni kungasebenzeki njengoba kusale kumanikiniki ngemuva kokubanjwa kwenkunzi.
Umnyango unxuse ukuthi abantu basebenzise ihhovisi lawo eliseMorningside khona eThekwini ekhoneni lemigwaqo, uSmiso Nkwanyane noMngeni noma baye ePosini ukuze bathole usizo ngamalayisensi.
Umnyango uxolise kakhulu ngalesi sigameko esibe ngaphezu kwamandla awo wacela amalungu omphakathi ukuthi uwubekezelele ubambisane nawo. Ugcizelele ukuthi inhloso enkulu yokuvala ukuzama ukulungisa ukuze konke kubuyele esimeni esifanele kuqhutshekwe nomsebenzi wokusiza abantu abathembele kuleli hhovisi. AMAPHOYISA asePinetown athungatha uNkk Margaret Dolly Chili (71), osesithombeni, wasemgwaqweni uSteve Biko eNew Germany olahleke ngoLwesihlanu olwedlule.
UNkk Chili kuthiwa ugcine ukubonwa ngomakhelwane bakhe ngoSepthemba 7 ngezithuba zabo-6.30 ntambama.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbele, uthe wagcinwa ebonwa ehamba eya ngasehostela eKK, eClermont. Kucelwa ongaba nolwazi ngokuthi ukuphi athinte uSgt Zenzi Mkhize ku-076 607 8883 noma inombolo yokubika ngobugebengu u-0800 10111.